Qirashada Suuqleyda SEO | Martech Zone
Raadinta mashiinka raadinta ayaa ah hal shey oo suuqgeynta suuq geynta ah, waxayna noqon kartaa mid jahwareer iyo khiyaano leh sida calaamadda baarkinka ee magaalada New York. Waxaa jira dad aad u tiro badan oo ka hadlaya oo wax ka qoraya SEO qaar badana way is burinayaan. Waxaan la xiriiray ka qayb qaatayaasha ugu sareeya bulshada Moz waxaanan waydiiyey isla sadexda su'aalood:
Waa maxay xeeladda SEO ee qof walba jecel yahay run ahaantii aan qiimo lahayn?
Waa maxay xeeladda SEO ee muranka badan ee aad u malaynayso inay runti qiimo leedahay?
Xilligan, waa maxay khuraafaadka ugu weyn ee SEO?
Dhowr mowduuc ayaa muuqda oo xoogaa khilaaf ayaa u dhexeeya khubarada, sidaa darteed waxaan kuu ogolaanayaa inaad gaarto gabagabadaada, oo aan rajeynayo inaad la wadaagi doonto qeybta faallooyinka ee hoose.
Waxaan u maleynayaa in adduunka SEO uu dhab ahaantii noqday mid casri ah goor dambe. Waxaa jira xeelado aad u yar oo ay soo dhoweeyeen dhinacyo fara badan oo run ahaantii aan waxtar lahayn. Taasi waxay tiri, waxaan u maleynayaa hal xeelad oo baahsan oo u baahan in la dhinto ay tahay shakhsiyan, qab-qabsi loogu talagalay barta casriga ah. Inta badan codsiyadani si liidata ayaa loo qabtay waxaanan ka shakisanahay in markay jawaab helaan, ay inta badan ka timaaddo goobaha aad doonaysid inaad ku dhajiso martida. Rand Fishkin, Moos
Dhismaha xiriirka. Had iyo jeer waxay ii ahayd doqon inaan waqti badan ku qaato xeeladaha isku xirka ka dibna abuura waxyaabaha ku jira meesha ugu horeysa. Had iyo jeer waxaan dhihi jiray waxay la mid tahay adigoo ku riixaya dhagax buur buur ku taal. Dadaal, way fuulaysaa buurta, laakiin cuf isjiidadka ayaa had iyo jeer dib ugu celiya meeshuu iska lahaa. Ka dhig boggaaga mid ka wanaagsan bog kasta oo kale oo webka ku saabsan isla mowduuca, ama ha daabicin. Had iyo jeer wuu shaqeeyaa. Looma baahna dadaal abuur abuur kadib. Patrick Sexton, Cunso Bootada
Waxaa jira waxyaabo aad u yar oo gabi ahaanba aan qiimo lahayn; wax walba meel ayey leeyihiin. Iyadoo intaas la yiri, ku darista bartaada a buugga weyn loo yaqaan PR6links4U.biz ayaa hada ka gudbay meel aan waxtar lahayn una gudubtay dhanka qatarta ah. Waxaan dareemayaa raaxo leh inaan kula taliyo dadka inaysan waligood ku darin barahooda cinwaan kasta oo u oggolaanaya qof walba inuu ku daro macluumaadkiisa iyaga oo aan dhexdhexaad ahayn. Phil Buckley, Curagami
Barta martida. Anigu tan kuma taaban doono tiirka markabka hadda, laakiin kaliya halka xiriirku ka dhisanyahay. Weli faa iidooyin ayaa ku jira tan, laakiin dadku waxay u baahan yihiin oo keliya inay ka baxaan maanka in tani aysan mar dambe ahayn waddo lagu helo xiriirinno. Andy Drinkwater, iQ SEO
Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa taas suuq-geynta waa xeelad aan qiimo lahayn - markii keligeed loo adeegsado (haye fiiri, jawaab celin-bixin). Waxaan arkaa dad aad u tiro badan oo qaatay "dhis oo way imaan doonaan" habka loo maro mowduucyada, halkaas oo ay dhigayaan waxyaabaha halkaa ku jira ka dibna ay dameerkooda uun ku fadhiyaan iyagoo filaya isku xirnaansho, saamiyo iyo natiijooyin. Kaliya uma shaqeyneyso sidaas oo kale. Xaqiiqdii waxaad ubaahantahay inaad firfircoonaato sida aad u suuq geynayso waxyaabahaaga iyo sida saxda ah, kahor intaadan xitaa soo saarin tusmada, waa inaad kudhigtaa cilmi baarista inaad raadiso kaliya fikradaha fikradaha suurtagalka ah, laakiin wadiiqooyinka daabacaadda ee suurtogalka ah. Mid ka mid ah qoraallada ugu wanaagsan ee suuq-geynta ee aan arkay sannadihii la soo dhaafay ayaa ah hagaha Macaamiisha Dev Shaybaarka ee jabsiga Google News, oo ku siinaya hagitaan weyn oo ku saabsan helitaanka qorayaal kaa daboolay mawduucaaga gaarka ah waagii hore oo laga yaabo inay mar labaad sidaas sameeyaan. Haddii aad isku darto suuq-geynta waxyaabaha ay ka kooban tahay cilmi baarista saxda ah, waxay ka gudbi kartaa qiimo-la’aan iyo qiimo-la’aan. Tom Roberts
Waxaan u maleynayaa inaan dhihi karo Keywords Meta waxay noqon kartaa wax yar oo aan qiimo lahayn. Qaar ka mid ah maamulayaasha websaydhadu wali way jecel yihiin in la been abuuro. Bing ahaan waxaa laga yaabaa inay u soo saaraan qiime wali Google waxaan dhihi lahaa qiime aad u kooban. James Norquay, Warbaahinta Barwaaqada
Dad badan ayaa ku boodaya tabtii ugu dambeysay ee SEO, iyada oo aan loo eegin waxa ay tahay si fudud maxaa yeelay waa laga hadlayaa inta badan, laakiin iyada oo aan si dhab ah looga fekerin iyada oo la tixraacayo barta iyo nooca ay ku shaqeynayaan. Digital Digital wuxuu waxtar badan u lahaan karaa niches-ka kuwa kale, tusaale ahaan. Taladaydu waa had iyo jeer in la fiiriyo dhammaan taatikada suurtagalka ah marka hore laakiin markaa hoos loo dhigo iyada oo ku saleysan soo noqoshada suurtagalka ah ee maalgashiga gudaha qaybtaas gaarka ah. Simon Penson, Zazzle
Ma dhihi lahaa taas rel = qoraa waa mid aan qiimo lahayn, waxay umuuqataa inay noqon doonto mid qiimo weyn leh mustaqbalka, laakiin waxaan u maleynayaa inaysan aheyn qodob weyn xilligan. Hadda waa waqtigii la dhisi lahaa aasaaska, weli lama gaarin waqtigii la arki lahaa natiijooyinka. Danny Dover, Lifelisted.com
Qaar badan oo SEO-yada ka mid ah ayaa iska indha tira wax qabad iyaga u keenaya iyaga xiriirin nofollow, laakiin waxaan aaminsanahay inay jirto qiimo aad u weyn xiriirinta nofollow taasi waxay soo diri kartaa gaadiid tayo leh. Rand Fishkin, Moos
Ma hubo taas muranka waa sifada saxda ah ee lagu tilmaami karo tan laakiin boostada martida Xaqiiqdii waa aag, wejigiisa, ay dhaleeceeyeen Google iyo kuwa kale dhawaan. Xaqiiq ahaan, arintu ma ahan soo dhajinta martida, taas oo aniga ila ah farshaxanka abuurista iyo la wadaagida nuxurka weyn boggaga laxiriira, laakiin taa badalkeeda xeeladaha "spammy" ee sida fudud loogu calaamadeeyay isla moniker. Had iyo jeer waxay ahayd arrin abuurista waxyaabo raqiis ah, oo aan la akhriyi karin iyo bixinta goob tayo liidata si loogu xidho xiriiriye waa dhaqan xumo waana in la joojiyaa, laakiin taasi maahan dhajinta martida, taasi waa spam. Simon Penson, Zazzle
Barta martida. Shaki la'aan, marka laga eego aragtida dhismaha iyo aragtida dhagaystayaasha cusub ma jiraan wax ka wanaagsan. Haddii sababta aad u sameyneyso ay kaliya tahay isku xirka, ha dhibin, laakiin haddii ujeeddadaadu tahay inaad waxbarto oo aad ka farxiso akhristayaasha markaa waxaad arki doontaa natiijo ganacsi oo togan. Phil Buckley, Curagami
Dad badan baa halkan jooga, sidaa darteed waxaan dooranayaa mid dad fadhiyaan labada dhinacba xayndaabka - qaarna dushiisa saaran yihiin! Sawiridda Bogga Bogga waa mid ka mid ah meelaha ay ku kala aragti duwan yihiin kuwa ku jira adduunka SEO-ga farsamada ah. Si kastaba ha noqotee, tan waa in si taxaddar leh loo maareeyaa maxaa yeelay ma doonaysid inaad ku dhammaysatid arrimaha marka Googlebot yimaado oo la yimaado booqashada. Xaq u hel, oo xaqiiqdi waxaa jira faa'iidooyin in la helo. Andy Drinkwater, iQ SEO
Waa inaan dhahaa boostada martida, waa mid ka mid ah siyaabaha ugu qiimaha badan ee lagu heli karo astaantaada iyo soo-jeedintaada horteeda dadweyne badan ama dhagaystayaal kale ah markaa horeyba waad u lahayd. Markaan u shaqeynayo daabacaad waxaan badanaa helaa marti sharaf cabsi leh oo dhajinta fikradaha iyo / ama garoomada. Waa inaad had iyo jeer keentaa ciyaartaada 'A', ama ugu yaraan iskuday. Martijn Scheijbeler, Webka Xiga
Run ahaantii, dhammaan xeeladahaas oo loo calaamadeeyay sida koofiyad madow, haddii koofiyaduhu yihiin sheygaaga, wuxuu leeyahay xoogaa qiime ah. Marka laga reebo sharci darrada sharci darrada ah (Joomla plugin exploiters, waan ku eegayaa adiga), waad awoodaa - oo waa - inaad aragto qiimaha dhammaan xeeladahaas, ha noqdaan shabakadaha baloogyada, iskuxirka kirada, jihooyinka ama xitaa spam wanaagsan . Sababta ay qaar ka mid ah SEO-yada wali u adeegsadaan xeeladahan ayaa ah iyaga oo wali shaqeeya. Wali waxay abuurayaan dakhli. Hubaal, boggaga aakhirka waa la ciqaabi doonaa laakiin haddii aad ka shaqeyso miisaaniyaddaada iyo soo noqoshadaada maalgashiga, weli waad sameyn kartaa faa'iido.
Hadda, haddii aad ka fekereyso inaad dhisato summad oo aad kobciso websaydhka oo aad rabto inaad adeegsato xeelado sida kuwan oo kale ah, waa in lagu toogtaa. Haddii aad u maleynaysid inaad khatar galin karto joogitaanka shabakadaada magacaaga adoo adeegsanaya habab SEO ah oo kuu arki kara in lagugu ciqaabay oo lagaa gooyay, waa inaad ka baxdaa ciyaarta SEO gebi ahaanba. Doqon baad tahay, waad foolxun tahay oo saaxiibbo ma lihid. Taabadalkeed, go'doominta imtixaanka oo ku qaad goob gebi ahaanba kaamil ah oo laga yaabo in guruub keyword gebi ahaanba ka duwan gebi ahaanba. Hababka qaar tijaabada u dhig. Cabir kharashaadka, darajooyinka, taraafikada iyo dariiqyada. Immisa lacag ah ayaad gelisay? Immisa jeer? Miyey u qalantay?
Ka fikir sida waaxda R&D - sida suuqleyda, waxaan ku leenahay shirkadeena inay baarto waddo kasta oo suurtagal ah oo soo saari karta dakhli. Kaliya waxay noqon kartaa in qaar ka mid ah hababkaan kale ay sidaas sameyn karaan. Mise ma noqon karaan kuwo dhaqaale ahaan waxtar leh. Ama way wada fashilmi karaan. Muhiimadu waa inaad tijaabiso oo aad aragto waxa adiga kuu shaqeynaya. Ka takhalus sumadaha iyo fikradaha hordhaca oo sii wad xogta. Tom Roberts
In kasta oo ay tahay oo keliya wadahadal lagu muransan yahay, haddana waan aaminsanahay saxda saxda ah (EMD's) iyo cinwaannada qeyb ahaan ciyaarta waxay leeyihiin qiime SEO ah. Taas macnaheedu maaha inaadan ka hor mari karin qof leh EMD haddii aadan mid haysan. Waxay ka dhigan tahay inay jirto xoogaa qiimo ah haddii aad heli karto EMD ama PMD. Robert Fisher, Madaxweynaha, drumBEAT Suuqgeynta
Waxaan dhihi lahaa mareegaha websaydhka ayaa dhisaya meela la tuuray oo u rogaya boggag taabacsan, waa istiraatiijiyad wali socota, haddii astaanta xiriiriyaha ay nadiif tahay. Hase yeeshe markii maamuleyaasha websaydhadu si mug leh ugu miisaamaan Google ayaa tirtiri kara waxaadna arkeysaa inay taasi dhacdo marar badan. Hase yeeshe, waxaad dareemeysaa kuwa ku xiran ee doonaya inay xoogaa lacag ah helaan. James Norquay, Agaasimaha La-talinta, Warbaahinta Barwaaqada
Waxay bilaabaysaa inay u ekaato Adwords ayaa kharash gareeya runti waxay saameyn ku leedahay noolaha. Uma maleynayo inay si toos ah isugu xiran tahay laakiin waxaa iska cad datasetkeyga inuu xiriir la leeyahay. Tani way ka duwan tahay xitaa sanad ka hor markii xiriirku uusan caddayn. Maaddaama Google uu bilaabay inuu dareemo cadaadis aad iyo aad uga badan kooxaha waaweyn ee warbaahinta bulshada, waxay macno samaynaysaa inay dabci doonaan siyaasaddooda u gaarka ah ee la xiriira darbiyada waaxyaha gudaha. Danny Dover, Lifelisted.com
Waxaa jira waxyaabo badan oo quraafaad ah dhismahaas wanaagsan, nuxur gaar ah waa inuu fiicnaadaa si loo helo qiimeynta. Taasi muddo dheer ma aysan aheyn, oo kufiican in la gurguurto oo la muujiyo macnaheedu maahan wanaag ku filan oo lagu qiimeeyo. Haddii aadan soo saarin natiijada ugu wanaagsan 10ka sare, waa maxay sababta Google ay kuu qiimeynayso? Rand Fishkin, Moos
Taasi dhajinta martida ayaa dhimatay! Iyo sidoo kale in SEO uu ku socdo jidkiisa. Dhisida dhagaystayaasha qiimaha leh iyada oo loo marayo raadinta dabiiciga ah ma tagayso waqti kasta haddii ay taasi tahay waxa SEO sameeyo markaa taasi waa la joogi karaa. Tabaha loo baahan yahay in lagu guuleysto waxaa laga yaabaa inay hadda ku jiraan anshaxyo kale laakiin qaybta farsamada ayaa wali muhiim u ah sidii waligeedba looga badin lahaa ROI kanaalka. Simon Penson, Zazzle
Khuraafaadka ugu weyn ee SEO ee madaxayga ayaa ah SEO ayaa ka waxtar badan qaabeynta iyo waxtar. SEO waa qayb yar oo ka mid ah waxa ka dhigaya goobta inay shaqeyso, maahan qayb weyn. Patrick Sexton, Cunso Bootada
Markuu qof dhaho 'SEO my site' waxa run ahaan loo tarjumayo waa, Wax fikrad ah kama haysto sida loola xiriiro websaydhka oo aan caawimaad ugu baahdo SEO maahan a daba-gal keligiis ah mar dambe. Haddii aad haysato qofkaaga SEO-ga ah ee silo dhinac ah, dhinac kasta oo kale oo ka mid ah joogitaankaaga dhijitaalka ah ayaa ku xanuunsan doona. Jaantuska 'Venn SEO' ayaa hadda lagu soo koobay qorayaasha, sawirada, xiriirka bulshada, fiidiyowga iyo R&D. Phil Buckley, Curagami
In adeegsiga ereyada muhiimka ah ee Meta tags ay waxtar leedahay ama Feejignaan erayga keyword. Ka qaado midkood labadan midkood. Keyword Meta tags ayaa faa'iidadooda laga xayuubiyey Google dhowr sano ka hor, in kastoo qaarkood ay yiraahdaan waxtar yar ayey ku leeyihiin Bing - laakiin waa wax yar. Helitaanka Erayga Cufnaanta ee saxda ah bogga sidoo kale waa mid kale oo lumiyay dhammaan faa'iidooyinkii sanado ka hor, laakiin e-mayllada spammy ee aan dhammaanteen ka helno shirkadaha 'caalamiga' ah ee 'SEO', wali way ka hadlayaan tan. Ku buuxi boggaaga ereyada muhiimka ah hadda, waxaadna sameyn doontaa waxyeello ka badan inta wanaagsan. Andy Drinkwater, iQ SEO
Taasi waa inaadan kala sareynta raadinta maxaa yeelay aad bay shaqsiyaad u yihiin maalmahan iyo wixii la mid ah oo aan la aaminin. Qaar ka mid ah SEO-yada waaweyn ayaa wax ka qoray tan tan 'lama siinin' ayaa la bilaabay sababta aad ula soconayso: guud ahaan waxay bixiyaan aragti guud oo ku saabsan sida aad uga shaqeyneyso matoorada raadinta. Gabi ahaanba waan ku raacsanahay iyaga, waxay ku siineysaa aragti aad ufiican halka aad hada ka joogto suuqa waxayna sidoo kale na siisaa xog qiimo leh oo ku saabsan tartamayaasha imaan kara maadaama aan tan ku dareyno dadaalkeena cilmi baarista. Martijn Scheijbeler, Webka Xiga
Taasi SEO waa waxa aad u baahan tahay oo dhan. Waxaa jira fikrad guud oo ah inaad shaqaaleyso shirkad wanaagsan oo SEO ah waxayna kaa caawin doonaan inaad sameyso malaayiin doolar bilo gudahood tanina runti waa quraafaadka ugu caansan ee warshadeena. Waxaan rumaysanahay in kobaca ganacsigu uu kuxiranyahay dhowr arimood oo kaladuwan oo ay kamid yihiin tayada adeega ama wax soo saarka, qiimaha sumadaha, isbadalada suuqa, suuq geynta, adeegyada macaamiisha iyo waxyaabo kale oo badan. SEO waa qayb uun ka mid ah suuqgeynta. Moosa Hemani, SEtalks
Wax aan had iyo jeer ku idhaahdo dadka ku cusub SEO-ga waa in aysan rumaysan buunbuuninta oo dhan. Taasi waxay u socotaa iyada oo aan loo qaadan ereyga Google sida injiilka iyo in la rumaysan waayo qoraal kasta oo SEO ah oo aad akhrisato. Runtu waa, inta badan qoraalada 'SEO blog posts' waa isku xirnaan buuxda. Intooda badani waa aragti, waxbadan waa mala awaal - inbadan oo kamid ah dadka wax qora ee wax qora ee wax ku qora SEO-ga ma yaqaaniin goorta ay aamusayaan inbadan oo kamid ahna ma ogaanayaan is-hoosaysiinta haddii ay kor u booddo oo ay wejiga ku dhufato (maskaxdaada waad samaysan kartaa on haddii aad u aragto in tani ay tahay mid macquul ah, ama meta).
Dadka ku jira warshadaha, waxaan u maleynayaa in Darajada Qoraagu tahay wax yar oo quraafaad ah, ugu yaraan habka ay inbadan oo ka mid ah qorayaasha wax qora ee SEO ay u aaminaan inay shaqeeyaan. Taladaydu waxay noqon doontaa in laga fogaado buuqa oo dhan oo la akhriyo waxa ay jecel yihiin Bill Slawski iyo Mark Traphagen inay ka yiraahdaan arrinta - ugu yaraan markaa waxaad heli doontaa aqoon sax ah oo aan gunaanad duurjoog ah ahayn. Tom Roberts
In dadka badankood ee yiraahda iyaga ama shirkadooda ay yihiin a shirkad SEO xirfadle ah runti waa. Inta badan shirkadaha sheeganaya aqoonta SEO waxay leeyihiin, ugu fiican, 10 ama 11% faham SEO ah. Robert Fisher, drumBEAT Suuqgeynta
Khuraafaadka ugu weyn ee SEO ayaa laga yaabaa inay yihiin dad u maleynaya inay bixiyaan $ 1 milyan PPC runtii way caawin doontaa ololahaaga SEO. James Norquay, Warbaahinta Barwaaqada
Quraafaadka ugu weyn ee hadda jira ee SEO ayaa ah taas SEO waa nool yahay waana soconayaa. Xaqiiqdii, way ka dhib badan tahay sidii waxtar ugu lahaan lahayd SEO sidii ay ahaan jirtay. Maalin kasta, SEO waxay noqoneysaa kanaal suuq geyn ah oo awood yar. Danny Dover, Lifelisted.com
Taasi haddii aad sameyso PR ama suuq-geynta waxyaabaha aadna hesho qiimeynta xiriirinta qiimaha sare waxay imaan doontaa iyada oo aan la helin xiriiriyeyaal qoraal ah. Waa hal qayb oo ka mid ah xujada SEO. David Konigsberg, Bartilmaameedka ugu Fiican
Jawaabaha kor ku xusan waxyar ayaa loo saxarray si cad oo gaabis ah.
Tags: adwords kharash gareeyaAndy DrinkwaterqoraaKoofiyad madowkoofiyad madow seoContent Suuqmurano seocuragamiDanny Doverdavid konigsbergdesignwicitaanadameela la tuuraysuuq garaacista durbaankasaxda ciyaarta ciyaartaquudin bot ahwanaagsanbarta casriga ahiNet SEOiQ SEOJames Norquaynool yahayLifelisted.comisku xirka dhismahamoznofollowxiriirinta nofollowbeegsiga ugu fiicanbogga sawirayntapatrick sextonPhil buckleyppcseo xirfad lehWarbaahinta Barwaaqomaqaarka kalluunka Randrobert kalluumeysteseo waa nooshahayseo waa dhimatayquraafaad seoquraafaadyo seoxeeladaha seoseo iyo naqshadSimon Pensonroberts tomtusmo gaar ahqiimo lahayn seoZazzle
Farriin weyn Kieran! Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaad aad u faa'iido badan oo halkan lagu wadaagay ..